अर्कोसाता २२ लाख ५० हजार कित्ता बराबरको आईपीओ निष्काशन हुँदै - DURBAR TIMES
HomeShare Bazarअर्कोसाता २२ लाख ५० हजार कित्ता बराबरको आईपीओ निष्काशन हुँदै
न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्ने मिति तय भएको छ । यस हाइड्रोपावर कम्पनीले असोज १५ गतेबाट रु. २२ करोड ५० लाखको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशतले हुन आउने ४५ हजार कित्ता कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशतले हुन आउने १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी २० लाख ९२ हजार ५०० कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्।
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा ५० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। यो आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा असोज १९ गते र ढिलोमा असोज ३१ गते बैंकिङ समयपछि हुनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थारु र तिनका शाखा कार्यालयका साथै मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ।
Previous articleसाहस उर्जाको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन; कति पर्यो आवेदन ?
Next articleप्रि ओपन सेसन अपडेटः साढे १६ अंक बढ्यो नेप्से